SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN (1001) qeybtii 30aad oo caawo xiiso gaar ah leh. – Filimside.net
Maalintii xigta markii la gaaray ayay duqdii ii timid ayadoo wajigeeda nooc kale yahay waxayna igu dhahday “wiiloow waxba ha I warsan waayo aniga markaan gabadhii u tagay hadalkaagiina u sheegay way igu xanaaqday waxayna igu dhahday aamus cajuusayahay xadkaaga haka soo gudbin hadii kale ciqaab daran ayaad la kulmi doontaa”
Markii ay sidaas I dhahday ayaan xanuun daran dareemay xanuunkaas oo ka darnaa kii hore ii haayay waxaana dareemay walbahaar daran.
Duqdii markkii ay I aragtay ayay igu dhahday gabadha sidaas ugama harayo barina waan u laaban wixii ka dhacaayo haka dhacaane.
Maalintii xigtay ayay duqdii baxday waxayn ii timid galabkii markaas ayay igu dhahday bishaareyso waxaan kuu wadaaakhbaar farxad leh.
Markii aan hadalkaas maqlay ayaan dareemay in ruuxdeyda jirkeyga kusoo laabaneyso waxaan ku dhahay duqdii “maxaa khabar ah oo ii heysaa?”
Waxay igu dhahday aniga shalay markaan kaa tagay waxaan ahaa mid aad u murugeysan una tiiraanyeesan waxaana ka baqayay gabadha markaan u laabto in ay marrkale isoo deyriso kadibna xaalkaaga kasii daro.
Markii aan u tagay anigoo aad u murugeysan wajigeygana walbahaar wey ka muuqdo ayay gabadhii igu dhahday maxaa kugu dhacay oo sidaan dhan ugu murugeysantahay?
Waxaan ku dhahay aniga shalay ayaan kuu imid waxaana fariin kaaga waday wiil aad kuu jecel jaceyl uu kuu qabayna sariirta la saarnaa, markii aan fariintiisa kuu sheegay waad I deyrisay ana markaan deyradaada u sheegay ayuu kasii daray wuxuuna hada ku suganyahay nolol iyo geeri dhexdooda.
Markaas ayay igu dhahday; wiilkaan xaalkiisa muxuu yahay bal iiga warbixi.
Waxaan ku dhahay waa wiil aad u wanaagsan qalbi jilcan maalmo kahor ayuu wuxuu kugu arkay arooskii heblaayo wuuna ku jeclaaday jaceyl waali ah ilaa uu kala jiraday sariirtana ka koray hadana wuxuu qarka u saaranyahay xaalad halis ah taasoo ah inuu jaceylkaaga u geeriyoodo hadii aan dagdag looga gaarin.
Markaas ayay igu dhahday iyadoo xoogaa murug dareentay; waxaan oo dhan ma dartey ayuu u murayaa? Markaas ayaan ku dhahay haa wlhi hadaad rabto waan kuu keeni karaa.
Waxay igu dhahday u tag iguna salaam una sheeg inuu ii yimaado maalinta jimcaha salaada kahor inta aabo uu masjidka ku maqanyahay kadibna intuusan soo laaban ayaan soo dirayaa.
Markii aan maqlay hadalkii habartii duqda aheyd waxaa igu tagay dhamaan wixii xanuunahaa ee I haayay qalbiga ayaana ii dagay waxaana dareemay farxad aad u weyn markaas ayaan duqdii lacag badan siiyay una duceeyay maadaama ay howl adag ii qabatay.
Maalintii jimcaha markii la gaaray ayay duqdii ii imaaday oo xaalkeyga iga wareysatay waxaana u sheegay inaan fiicnahay kadibna waan is diyaariyay anigoo ku labistay labis heer sare si fiicana isku carfiyay waxaana damcay inaan baxo.
Hase yeeshee duqdii ayaa igu dhahday waqti kugu filan ayaad heysataa walina lama gaarin waqtigii balanta ee kawaran hadaad timaha iska jarto waqtiga kuu haray oo aad is qurxiso?
Markaas ayaan ku dhahay waa runtaa waxaana wiil yar u diray inuu ii keeno timo jare sare misna caaqil ah si heer sarana wax u jari yaqaano asluubtiisana sareeso.
Kadibna wuxuu ii keenay odaygaan tima jaraha ah markuu ii yimid ayuu I salaamay oo xaalkeyga iga wareystay waxaana u sheegay inaan roonay markaas ayuu ii gudo galay timo jarista iyo sida ay u wanaagsantahay inuu iiga sheekeeyo markaas ayaan daldalankiisa dhibsaday waxaana ku dhahay; warkaan badan iga jooji waxaan aheyn inaad madaxa ii jarto kuuguma wicine.
Markaas ayuu igu dhahay hadii aad ogaan laheyd arinka xaqiiqdiisa waxaad iga dalban laheyd inaan warka kuu sii bayaaniyo waxaana maanta kuugu baaqayaa inaad sameyso waxaan ku dhaho, anagoo meerayaasha ka tusaale qaadaneyno hana cabsanin waayo aniga waan kula talinayaa waana kuu naxariisanayaa, anigoo sidoo kalana mudo sanad kaamil ah kuu khidmeyn doono wax ajar ahna kaama rabo.
Markii aan hadalkiisa maqlay ayaan waxaan ku dhahay; inaad maanta war igu disho ayaad rabtaa soo ma ahan balaayo war badane.
Markaas ayuu I dhahay sayidii waa aniga kii ay dadka ugu yeerayeen inuu yahay ki aamusnaa hadalyarideyda owgeed waxaana gooni ka ahay walaalaheyga oo warbadni looga haray, midka koowaad waxaa la yiraahdaa Baqbuuq, midka labaadna waxaa la yiraahdaa hadaar, midka sadaxaadna waxaa la yiraahdaa baqiiq, midka afaraadna waxaa la yiraahdaa kuuz, midka shanaadna waxaa la yiraahdaa cushaar, midka lixaadna waxaa la yiraahdaa shaqaaliq, midka todobaadna waxaa la yiraahdaa saamit waana aniga saamitkaas aamuska badan .
Markuu timo jarihii saas I dhahay ayaan dareemay in madaxa I qarxi rabo war badnidiisa owgeed markaas ayaan wiilkii ii keenay ku dhahay war ninkaan hal dirham sii oo iga wad inaan sii arko ma rabee xitaa in timaha la ii jaro ayaananba rabin waaba iska dhaafay wlhi.
Timo jarihii markuu hadalkeyga maqlay ayuu wuxuu I dhahay; waxaan u maleynaa inaadan garaneynin darajada aan leeyahay, aniga gacanteyda waxay qabataa madaxyada boqorada, waaliyada garsoorayaasha iyo raga ugu sareeyo dowlada mark aka fiirso.
Markaas ayaan ku dhahay; war warkaaga ma rabo madaxa ayaadba I xanuujisay ee iga tag.
Wuxuu iigu jawaabay…..
La soco qeybta 31aad bari insha’allaah.